IOS 15 ee Apple waxa uu beddeli doonaa suuqgeynta iimaylka | BehMaster
Bogga ugu weyn/E-commerce/IOS 15 ee Apple wuxuu bedeli doonaa suuqgeynta iimaylka
IOS 15 ee Apple wuxuu bedeli doonaa suuqgeynta iimaylka
Apple ayaa dhawaan soo bandhigtay barnaamijkeeda iOS 15, kaas oo soo baxay dayrta. Inta badan sifooyinka cusub waxay diiradda saaraan sirta, xogta dabagalka, iyo amniga isticmaalaha. Laba sifo, "Ilaalinta Qarsoonnimada Boostada" iyo "Qari iimaylkayga," ayaa si weyn u saameyn doona suuqgeynta iimaylka. Labadaba waxaan kaga hadli doonaa qoraalkan.
Ilaalinta Asturnaanta Boosta
Ilaalinta Qarsoodiga Boostada waxay siin doontaa isticmaalayaasha iimaylka iOS 15 ikhtiyaar inay ku shubaan macluumaadka fog si gaar ah oo aysan u shaacin cinwaanadooda IP-ga. Natiijadu waxay xannibi doontaa awoodda soo-diraha si uu ula socdo furnaanshaha iyo horeba waxayna qarin doontaa IP-ga qaataha, kaas oo go'aaminaya goobta jireed.
IOS 15 ee Ilaalinta Qarsoonaanta Boostada waxay siin doontaa isticmaaleyaasha ikhtiyaar inay ku shubaan waxyaabaha fog si gaar ah oo aysan u shaacin cinwaanadooda IP-ga. Sawirka: Apple
Bixiyeyaasha adeegga iimaylka - Mailchimp, MailUp, Contact Constant, qaar kaloo badan - geli sawir 1-pixel ah oo aan la arki karin marka la diro. Sawirku wuxuu raadraacaa haddii helehu furo iimaylka iyo inta jeer, taasoo keentay in la soo sheego heerar furan oo gaar ah oo guud. Tani waa macluumaad dheer, macluumaad qiimo leh oo loogu talagalay suuqgeynayaasha iimaylka, oo ka tarjumaysa saamaynta khadadka mawduucyada, madax-hore, iyo guud ahaan ka qaybgalka macaamiisha.
Qarsoodinimada Boostada ee iOS 15, suuqleydu hadda way indho la'aan doonaan iimaylka u furmay isticmaalayaasha doortay ilaalintaas. Isticmaalayaasha kale, kuwa ku jira desktop-ka iyo aaladaha Android, wali waa la raadin karaa.
Iimayllada 2021 waxaa inta badan laga furay taleefannada casriga ah. IOS waa qayb weyn oo ka mid ah suuqaas. Haddii Android ay qaadato doorashooyin qarsoodi ah oo la mid ah, 98% isticmaalayaasha casriga ah waxay yeelan doonaan ikhtiyaar ah inaysan shaaca ka qaadin iimaylkooda.
IOS 15's Ilaalinta Qarsoonaanta Boostada si toos ah uma suurtagelin. Isticmaalayaashu waa inay doortaan. Si kastaba ha ahaatee, waa ammaan in la yiraahdo, marka la sii daayo, soo dirayaashu waxay filan karaan hoos u dhac ku yimaada sidaana heerarka furan. Saameyntu waxay dhaafsiisan tahay xariiqyada mawduucyada iyo madax-hoosaadka ka hor. Ka-qaybgalka isticmaalaha waqti ka dib wuxuu inta badan saameeyaa tabaha kala-soocidda suuq-geynta. Macaamiisha fura wax yar ayaa laga yaabaa inay helaan fariimo yar oo leh halabuuro kala duwan, tusaale ahaan.
Intaa waxaa dheer, suuqleydu waxay si joogta ah u nadiifiyaan macaamiisha aan firfircoonayn. Nadiifinta xogta noocaan ah waa lama huraan sababtoo ah waxay wanaajisaa gaarsiinta guud. Hawlgalinta boqolleyda badan ee qaatayaasha aan firfircoonayn waxay ku dambayn karaan galka junk ama spamka, maadaama bixiyeyaasha adeegga internetku ay u malaynayaan in iimayladaas ay qiimo yar leeyihiin. Cusboonaysiinta qarsoodiga cusub ee Apple ayaa ka dhigaysa in la tirtiro macaamiisheeda firfircoon.
Ugu dambayntii, lagu falanqeeyo qiimayaasha furan domain ahaan (@gmail, @yahoo, @hotmail) waxay aqoonsan kartaa ISP-yada xiray iimayllada ama si kale wax uga beddelay gaarsiinta. Ikhtiyaarka qarsoodiga iimaylka cusub ee macruufka, suuqeeyayaasha ayaa luminaya awoodan.
Qari iimaylkaygu waa astaamo kale oo Apple ah oo cusub, oo laga heli karo iOS 15, macOS Monterey (oo la shaaciyay bishan), iyo goobaha iCloud. Tilmaamku wuxuu u oggolaanayaa isticmaaleyaasha inay iska diiwaangeliyaan soo-jeedinta iimaylka cinwaan la kala soocay oo ay soo saartay Apple beddelkii ciwaanka iimaylka dhabta ah. Apple ayaa markaa u gudbisa iimaylada koontada ugu weyn ee isticmaalaha. Isticmaalayaashu waxay si fudud u tirtiri karaan ciwaanka cusub ee iimaylka si ay uga hortagaan faafitaanka shabakada.
Qari iimaylkayga ayaa dhowr arrimood u keenaya suuqgeynayaasha. Marka hore, ma jirto hab fudud oo lagu sheegi karo haddii saxeexa cusub ee iimaylka uu yahay xisaab sharci ah ama "gubi." Tani waxay u malaynaysaa inay sababi doonto arrimaha keenista, maadaama macaamiishu ay si dhakhso ah u tirtiri karaan iimaylka, taasoo keentay kor u kaca iyo walaaca ISP-yada, kuwaas oo wax ka bedeli kara gaarsiinta. (Si kastaba ha ahaatee, bixiyeyaasha adeegga iimaylka ee sumcadda leh ayaa si toos ah u nadiifiya "adag" boobka, iyaga oo meesha ka saaraya saameyntooda ISPs.)
U diyaari hadda iOS 15 Ilaalinta Qarsoonnimada Boostada. Tijaabi sicirka furan ka hor inta aan la bilaabin dayrtan. U samee ka hor iyo ka dib bartilmaameedyada:
"Laga soo bilaabo" khadadka.
Qari iimaylkaydu waxay u badan tahay inay saamayn doonto keenista Isha ku hay qiimayaashaas oo hubi in ESP-gaagu ay isla markiiba meesha ka saarto boogaha adag.
DIZO Daawo muuqaalka koowaad/sawirada nolosha dhabta ah oo soo daatay
18ka Mawduucyada WordPress ee SEO ugu Fiican ee Suuqgeeyayaasha Dijital ah